Automotive Upholstery hoditra
Fitaovan'ny gorodona fiara
Fiara Foot Mat
Fiara Fiara Foot Mat
Sarona seza fiara
Tratry ny andro fisaorana
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-25
Fetin’ny fianakaviana ny fisaorana, fotoana iarahan’ny fianakaviana, fotoam-pifaliana, fotoan’ny fihaonan’ny mpianakavy, fotoana hanavaozana ny finamanana, fotoana hizarana ny hafalian’ny fisaorana sy hisaorana an’Andriamanitra noho ny fahatsarany. ary izany no atao hoe Thanksgiving. Ny Hist...
Ahoana no tokony hanovana ny atitany amin'ny fiara
Miaraka amin'ny fiafaran'ny Zhengzhou Convention and Exhibition Center International Auto Show, mihamaro ny tompona fiara tsy tia fiara vaovao fotsiny, fa te hanova ny atiny amin'ny fiarany araka izay tiany, amin'ny fampiasana ny akora vita amin'ny hoditra tiany indrindra, toy ny PU microf...
2021 Fampirantiana fiara iraisam-pirenena Zhengzhou faha-14
Anaran'ny fampisehoana fiara: 2021 Faha-14 Zhengzhou International Automobile Exhibition Car Show Type: Fiara feno Fampisehoana Auto Time: Nov. 04, 2021 - 08 Novambra 2021 Toerana fampirantiana fiara: Zhengzhou International Convention and Exhibition Center Fampidirana Auto Show: The 14th Zhengzhou International Autom...
2021 Ny Foara Fampirantiana hoditra Shina rehetra dia ho any Shanghai
2021 All China Leather Exhibition Fair nahemotra amin'ny 23 ka hatramin'ny 25 Novambra Ny mpikarakara ny China Leather Exhibition (ACLE) rehetra China Leather Association (CLIA) sy Asia Pacific Leather Fair Limited (APLF), dia nanapa-kevitra ny hanemotra ny Foara Fampirantiana hoditra Shina rehetra tany am-boalohany...
Fampiharana ny PVC hoditra sy PU hoditra
Ny anarana feno ho an'ny hoditra PVC dia hoditra polyvinyl chloride. PVC dia fitaovana tsy kristaly izay manana fanoherana tsara amin'ny oxidation, asidra mahery ary fihenam-bidy. Ny hoditra PVC koa dia manana hery avo sy fahamarinan-toerana tsara, ary tsy mirehitra ary mahatohitra ny harafesina vokatry ny toetr'andro ...
Inona no mahasamihafa ny hoditra PU sy ny hoditra PVC?
Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny tompona fiara amin'ny fisafidianana ny fiara anatiny ho an'ny fiarany, very hevitra momba ny fomba hisafidianana eo amin'ny hoditra PU sy ny hoditra PVC, androany isika dia handinika amin'ny lafiny maro amin'ny PU sy PVC amin'ny farany izay maha samy hafa. Fampidirana ny hoditra PU: Po...
Inona no atao hoe Microfiber Leather? (2)
Ny hoditra microfiber dia mahazo aina, tsara tarehy, mafana ary mifoka rivotra. Manana mari-pahaizana draping sy plump tsara izy io, ary manana fanatsarana miharihary amin'ny fananana hydrophobic sy antifouling. Ny maha samy hafa ny hoditra microfiber sy ny hoditr'afo: Fisehoana Microfiber lea...
Inona no atao hoe hoditra microfiber? (1)
Ny anarana feno ny microfiber dia microfiber PU hoditra synthetic. Amin'ny ankapobeny, microfiber dia vita amin'ny sosona PU (polyurethane resin) sy lamba microfiber. Ny firafiny dia akaiky indrindra amin'ny hoditra tena izy, ary an'ny taranaka fahatelo amin'ny artif...
Nahoana no tsy mitovy amin'ny hoditra hafa ny hoditra fiara
Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy mahafantatra fa misy fahasamihafana eo amin'ny hoditry ny kirarony, ny sofa, na ny seza fiara. Ny hoditra dia hoditra (raha tsy izany), fa ny fandinihana akaiky dia mampiseho fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny lamaody na ny upholstery sy ny ...
Ahoana ny fanadiovana ny hoditry ny fiara
Mba hiarovana ny fiarantsika dia hifidy ny ondana hodiny fiara tiany indrindra ny tompony mba hiarovana ny fiara tiany. Ny cushions fiara dia tsy vitan'ny hoe afaka manalava ny androm-piainan'ny fiarantsika, ary mahatonga ny fiarantsika ho tsara tarehy kokoa. Hojerentsika aloha ny toetran'ny hoditra...
Ahoana ny fisafidianana ny tongotry ny fiara
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-01
Ny orinasa Bensen dia mifantoka amin'ny famokarana anatiny fiara. Amin'izao fotoana izao, ny tsihy fiara amin'ny tsenan'ny fiara dia mizara ho: tsihy fibre simika, tsihy fingotra, tsihy manodidina sy tsihy hoditra, sns amin'ny fitaovana. Fitaovana isan-karazany amin'ny tsihy fiara, tombony ary d...
Ahoana no mifidy fiara anatiny?
Ny atitany fiara dia ampahany manan-danja amin'ny vatan'ny fiara, indrindra mizara ho tafon'ny fiara, familiana, tontonana varavarana, tontonana fitaovana, seza fiara ary karipetra. Araka ny antontan'isa, ny entan'ny famolavolana ny atitany fiara dia mitentina 60% amin'ny enta-mavesatry ny fiara. Ao anatiny tsara...
Adiresy: Shangwu Neihuan Road, CBD Convention Center, Zhengzhou, Henan, Shina.
Raha misy fanontaniana momba ny akora sy loko ao anaty fiara, azafady mba mifandraisa amiko sy ekipa matihanina miasa ho anao